The World Nepal News | हिजोआजको आन्दोलन, भारतीय मिडिया र शंका :
हिजोआजको आन्दोलन, भारतीय मिडिया र शंका :
संवाददाता | २०७७ जेष्ठ ३१, शनिबार
हिजोआज काठमाडौमा, विशेष त बालुवाटार वरिपरि भएको शान्तिपुर्ण आन्दोलन सामान्य आन्दोलन जस्तो देखिएन । शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई हृदय देखिनै सम्मान छ तर यो आन्दोलनलाई भारतीय बिस्तारवादको एजेन्टको डिजाइनमा भएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनभने भारतीय मिडियाले विषय र प्रसंगलाई बंगाएर आफ्नो मिडियामा प्रचारप्रसार गरेको देखियो ।
आन्दोलनमा विशेष त सुकिला मुकिला अनि अंग्रेजी बोल्न जान्ने युबाहरुको जमात एकाएक सडकमा निस्किएर हजारौको संख्यामा सहभागी भएको देखियो । तथापि केही सामान्य मानिस अनि सकारात्मक दबाब दिन सकारात्मक सोचले पनि निस्केका होलान् । फेरि आन्दोलन काठमाडौं मात्रै होईन अन्य जिल्लामा पनि भएको देखिन्छ ।
आन्दोलनको शुरूवात :
करिब जेठ २४ गते तिर एउटा फेसबुकमा प्राईभेट ग्रुप देखियो । त्यसको नाम थियो “Covid 19 Nepal: Enough is Enough” भन्ने थियो । त्यो ग्रुप खोलेको छ सात दिनमै जबर्जस्ती एउटाले अर्कोलाई ईन्भाईट गर्दै एक लाख जना सदस्य पुर्‍याएको देखियो । जुन निकै आश्चर्यलाग्दो बिषय हो । रमाइलो कुरा त आन्दोलनको बारेमा आलोचनात्मक कुरा उठाएमा उसलाई तत्काल ब्लक गर्ने गरेको पनि देखियो । र आन्दोलनको बिरोधी कमेन्टहरुलाई समेत तत्काल हटाइने गरेको देखियो । आन्दोलन कसरी गर्ने र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बिषयमा विशेष छलफल गर्दै आन्दोलनका नाराहरु के कस्तो बनाउने ? प्लेकार्डमा के के लेख्ने ? आदि बिषयमा छलफल गरेको देखिन्छ ग्रुपमा । अनि भोलिपल्ट एकाएक मानिसहरु सडकमा उत्रिएका हुन्छन् ।
आन्दोलनमा सहभागीको अनुहार :
आन्दोलनकारी मानिसहरु कोरोनाको महामारी फैलिरहदा आन्दोलनमा जाउ जाउ भन्ने रहर जागाईन्छ त ? त्यसो त फेरि गैरराजनीतिक र स्वतन्त्र ब्यक्तिहरुको सहभागीता मात्रै आन्दोलनमा छ, भनेर प्रचारप्रसार गरिएको देखिन्छ । तथापी सहभागीताको अनुहार, नारा, प्लेकार्डमा लेखिएका भनाईहरु सबै बिश्लेशन गर्दा समग्रमा सरकार बिरोधी देखिन्छ, भने राजनीतिक पार्टीमा विवेकशील, नेपाली काँग्रेस, राजाबादी, राप्रपा, जनता समाजबादी आदि सत्ता विपक्ष पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ ।
उनिहरु आन्दोलन मात्र गरिराखेका छैनन्, हाइ टेक क्यामराबाट फोटो खिच्छन् र आन्दोलनको छोटो फिल्म जस्तै बनाउछन् अनि फेसबुकमा पोस्ट गर्छन् । कुन फोटो कस्तो भिडियो भाइरल हुन्छ र कुन हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरुलाई राम्ररी ज्ञान भएको देखिन्छ। प्रहरीले नियन्त्रण गर्न खोज्दा जनतालाई भट्काउने गरि प्रहरीको ज्यादती भन्दै भिडियो/फिल्म बनाउछन्। फेसबुकमा बुस्ट गर्दै भाइरल बनाउछन् । हातमा आइफोन, मुखमा महँगो माक्स, आँखामा महँगो चस्मा हुन्छन् । निम्न र मध्यम बर्गका मानिसहरु कम देखिन्छन् भने उच्च/सम्भ्रान्त बर्गका मानिसहरूको उल्लेख्य सहभागी देखिन्छन् । यो देख्दा लाग्छ, आन्दोलनको तयारी धेरै दिनदेखि गरि आन्दोलनको अगिल्लो दिनको रातभर तयारी गरि दिउँसो सडकमा प्रदर्शन भैरहेको छ । र यो आन्दोलनलाई पछाडिबाट अदृश्य शक्तिले उचालिरहेको छ ।
आन्दोलनमा शंका :
यो आन्दोलन सामान्य आँखाले हेर्दा जनताको जायज माग राखेर गरेको देखिएता पनि समय र हाउभाउ हेर्दा आन्दोलनको नियत ठिक देखिन्न किनभने केही हप्ता अगाडि नेपालको अतिक्रमित भुमि लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक हुँदा भारतमा/को मिडियामा खैलाबैला मच्चिएको थियो । त्यसो हुँदा भारतले कुनै पनि हालतमा नेपालको नयाँ नक्सा लागू गर्न नदिने रणनीति रचिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अर्को कुरा सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गर्यो । नक्सा र निशान छाप आधिकारिक रुपमा फेर्नको लागि संविधानको केही धारामा संसोधन गर्नको लागि संधोधन प्रस्ताव राख्यो । भारतको छिर्की र टिकडमलाई चिर्दै प्रायः सबै राजनीतिक दल सहमति भएको छ ।
अनि त्यही बेला, क्वारेन्टाइन राम्रो ब्यबस्थित हुनु पर्‍यो, कोरोना महामारीमा भएको खर्चको विवरण चाहियो, पिसीआर चेकजाँच बढाउनु पर्‍यो जस्ता माग राखी हजारौंको संख्यामा आन्दोलन गरिन्छ र भारतिय मिडियामा भारतको जित भएको जस्तो गरि नेपालमा नयाँ नक्साको विरुद्धमा नेपाली जनता सडकमा असमत भन्दै भारतीय मिडियाले समाचार बजाउन/बनाउन थालिन्छ भने यसलाई के भन्ने ?
अन्तमा : अब आउदो शनिबार नेपालको संसदबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नयाँ नक्सा र निशानछाप पारित हुँदैछ । त्यसै दिन यो सरकार विरुद्ध सबै शक्ति लगाएर ठूलो प्रदर्शन गरेर फेरि भारतीय मिडियाहरुले नेपाली जनताको भावना बिपरित नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पास गर्‍यो भन्ने स्याल हुँईया गर्नेछ । सायद त्यसैको तयारी यो जमातको भित्री नाईकेले योजना बनाउदै होला । भारतको त्यही योजना सफल पार्न आफ्नो सम्पुर्ण बल लगाईरहेको हुनसक्छ । जसलाई हिजोआजको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीको रूपमा सहभागी हुने तपाईं हामीले सबैले साथ दिइरहेका त छैनौं ?
२०७७ जेष्ठ ३१, शनिबार प्रकाशित